Shir Isugujira Tababar Iyo khibrad-Wadaag Oo Lasoo Gabagabeeyay - Cakaara News
Shir Isugujira Tababar Iyo khibrad-Wadaag Oo Lasoo Gabagabeeyay
Jigjiga(cakaaranews)Axad 28ka May 2017.Shir usocday mudo 3 maalmood ah oo ay kasooqaybgaleen maareeyaha dakhliga DDSI, wasiir-kuxigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka Dhismaha iyo warshadaha DDSI, 6da maamul magaalo iyo magaalooyinka soo koraya ee deegaanka oo tiradoodu dhantahay 24 magaalo iyo waliba masuuliyiin iyo khabiiro kascoday deegaanka oromiya islamarkaana kusaabsanaa khibrad wadaag iyo tababar kuqotama dhanka horumarinta magaalooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada jigjiga.
Khibrad wadaagan oo ay si wada jir ah u soo agaasimeen Xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo warshadaha DDSI iyo xafiiska dhigiisa ah ee deegaanka oromiya ayaa waxaa xidhitaankiisii kahadlay Maareeyaha Wakaalda Dakhliga DDSI mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo sheegay in 4 tii sano ee udanbaysay ay kor ukaceen horumarka magaalooyinka DDSI. Wuxuuna intaa kudaray maareeyuhu in shirkani uu ahaa shir khibrad wadaag ah oo lagu sii xoojinayo horumarinta magaalooyinka hadaythay dhismaha iyo haday tahay shuruucda u taala horumarinta magaalooyinka.
Sidookale, wasiir-kuxigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka, dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Axmed Shugri ayaa sheegay in shirkani uu ahaa mid khibrad wadaag ah oo u dhaxeeyay deegaanka soomalida iyo deegaanka oromiya oo ku qotama dhismaha iyo kobcinta magaalooyinka. Wuxuuna xusay in khibarado muhiim ah lakala qaatay isagoo kuladardaarmay kaqaybgalayaasha in ay dhaqangaliyaan casharadan lakala qaatay.
Ugudanbayna kasooqaybgalayaashii oo dareenkooda kahadlaya yaa sheegay in casharo aad faaiido ugu leh ay kaheleen tababarkan islamarkaana ay kadhaqan galinayaan magaalooyinkii ay kayimaadeen.